हाम्राे पिपलबाेट » चिकित्सक र नर्समा कोरोना देखिएपछि कोहलपुर स्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको प्रस्तुति गृह सिल… चिकित्सक र नर्समा कोरोना देखिएपछि कोहलपुर स्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको प्रस्तुति गृह सिल… – हाम्राे पिपलबाेट
चिकित्सक र नर्समा कोरोना देखिएपछि कोहलपुर स्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको प्रस्तुति गृह सिल…
बाके नेपालगन्जमा चिकित्सक र नर्सलाई समेत कोरोना देखिएपछि कोहलपुरस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको प्रसूति गृह सिल गरिएको छ ।
शुक्रबार बाँकेका ४९ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएकामध्ये ६ जना यही मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मी थिए । जसमा एक जना चिकित्सक र ५ जना नर्स थिए । संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी प्रसूति गृह मा कार्यरत थिए । अस्पतालको सहायक निर्देशक डा. दिनेश श्रेष्ठका लेबर रुम सिल भएकाले अत्यावश्यक बिरामीलाई नेपालगन्जको भेरी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा रिफर गर्नुपरेको बताउनु भयो।
उहिले पीसीआर रिर्पोट ढिलो आउँदा स्वास्थ्यकर्मीले ढुक्क भइ काम गर्न नसकेको सुनाउनुभयो । २१ गते अस्पतालका १० जना स्वास्थ्यकर्मीको पीसीआर रिपोर्ट पठाएकोमा ५ जनाको मात्रै शुक्रबार रिपोर्ट आएको थियो । अरु ५ जना आत्तिएर अस्पतालमै बसेका छन् । बाँकेमा शुक्रबार ४९ जनामा कोरोना पुष्टि त्यस्तै, शनिबार ५० देखि ६० जना स्वास्थ्यकर्मीको पीसीआर जाँचका लागि पठाउनु पर्ने छ । रिपोर्ट समयमै नआउँदा काम गर्न असहज भएको डा. श्रेष्ठले बताउनुभयोप । उहाँका अनुसार अस्पतालको मर्चरीमा दुई वटा शव राख्ने क्षमता छ । यद्यपि पीसीआर रिपोर्ट ढिला आएकै कारण तीन शव थपेर राख्न बाध्य भएको बताउनुभयो । ‘बेलैमा रिपोर्ट आइदिए शव व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो’, उहाँले भन्नुभयो । अस्पतालमा दैनिक १० देखि १५ जना सुत्केरी आउने गर्छन् । अस्पतालको लेबर रुप सिल भएकाले बिरामीले अनावश्यक दुख झेल्नु परेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
बाके स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख एबम कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार स्वाब संकलनमा ढिलाइ हुदा र प्रक्रिया पुर्‍याउँदा कम्तीमा तीन दिन लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले पीसीआर रिपोर्ट समयमै बुझाएको दाबी गर्नुभएको छ ।